Amava eKhaya leLizwe-i-Roadvale, i-Scenic Rim - I-Airbnb
Amava eKhaya leLizwe-i-Roadvale, i-Scenic Rim
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDiana & Stewart
UDiana & Stewart yi-Superhost
Zipholele kwigumbi elinomnyango ophumela ngaphandle, ukuya kutsho kubantu abadala abayi-3 (akukho bantwana bangaphantsi kweminyaka eyi-13), kunye nazo zonke izinto ezenza uzive usekhaya. Kwiyure nje enye ukusuka eBrisbane, phakathi kweedolophu ezintle zaseBovaila, eKalbar naseHarrisville.
'Imyuziyam Yezithuthuthu zasePanorama ethandwayo' ngumnyango osondeleyo kunye nokutya okumnandi kwasekuhlaleni ukuya kwi-Roadvale Pub (imizuzu eyi-15. xa uhamba).
Dibana nee-alpacas, iidada, izinja kunye neecook okanye uphumle ngasemlilweni.
Isidlo sakusasa siyafumaneka ngosuku lokuqala. Iti nekofu ziyafumaneka.
Eli gumbi lizimeleyo, elidibene nendlu enkulu, linegumbi lokulala elibethwa ngumoya, igumbi lokuhlambela eline-spa, ikhitshi elincinci elinento yonke (i-hotplate enye ngaphakathi, i-weber Q BBQ ngaphandle) nendawo yokuhlala evulekileyo kumgangatho oqhelekileyo okwaziyo ukubona iindawo.
Seta kwi-acres kunye nee-alpacas ezintathu, ii-kelpies ezimbini (i-Bwagen kunye ne-Lola), iidada kunye neecooks, idama, iintlobo ezahlukeneyo zeentaka ezityeleleyo, iigusha ezikufutshane, iinkomo kunye namahashe.
Iindwendwe ziyakwazi ukonwabela: igadi yendlu; indawo ekhethekileyo enomngxuma womlilo wokujonga iinkwenkwezi nokuzifudumeza ngokuhlwa okupholileyo; ingxaki ye-slack-line; ukondla izilwanyana; ukuqokelela amaqanda; nokuhamba kwii-alpacas, ukuba uhamba nombuki zindwendwe, xa umbuki zindwendwe ekhona.
Zipholele ekhaya okanye uye kwiindawo ezininzi ezinika umdla zasekuhlaleni ezifana: neFama Yeenkamela, iindawo ezahlukahlukeneyo zokwenza iwayini, iibhari, iikhefi, amachibi, okanye iindawo zokunyuka intaba ezikufutshane neendlela zokuhamba ngebhayisekile – iMount Joyce okanye iVale Efihliweyo.
Yonwabela isidlo sakusasa esiquka: amaqanda amatsha efama (idada okanye icook), imifuno/imifuno esuka egadini, iitomato, amakhowa, isonka, ibhotolo, ubisi, ikofu kunye neti. Izinto zokupheka nezinto zokupheka ezifumanekayo.
4.98 · Izimvo eziyi-135
Umbuki zindwendwe ngu- Diana & Stewart
Siyakonwabela ukunxibelelana neendwendwe zethu kodwa siyabuhlonipha ubumfihlo bakho ukuba ukhetha indawo ezolileyo engaphazanyiswayo. Nangona kunjalo eminye imisebenzi njengoko bekutshiwo ngaphambili inokufuna ukukhapha umamkeli.